IPanda Used Car - IHankouBei Import & Export Service Co, Ltd.
Imvelaphi ye- "Panda Used Car" evela e-Wuhan, okuyidolobha elifanele futhi elimaphakathi nedolobha elikhulu lezimboni e-China, enenzuzo yokwenza uchungechunge lwezimboni ikakhulukazi ukwenziwa kwezimoto, ukuthuthukiswa kwamanethiwekhi okuxhasa nokusekela okukhulu kohulumeni basekhaya ukuthekelisa ibhizinisi.
I- "Panda Used Car" ingumkhakha osebenza ngobuchwepheshe obusetshenzisiwe ongaphansi kweHankoubei Import and Export Service Co., Ltd., nokuyinkampani ephethwe yiZall Smart Commerce Group (02098.HK, iZall iyibhizinisi elizimele nelikhulu kunawo wonke Isifundazwe saseHubei, nesibalo sebhizinisi esimbozayo: Ukuhweba, Ukukhiqizwa Kwezindiza, Izimbobo, Ukubhanga, Ibhola, njll.). Ngokuxhaswa nguhulumeni wasekhaya kanye nenkampani yabazali enamandla, sizibophezele ekuhlinzekeni insizakalo yokuthekelisa izimoto ngobuchwepheshe kuzo zonke izifunda emhlabeni jikelele, ikakhulukazi amazwe "eBelt & Road".
Sethemba ukuthi “iPanda Used Car” izongena kancane kancane enhliziyweni yamakhasimende njengomcebo owaziwa kakhulu waseChina — iPanda!
Ukudalulwa Okugcwele: Senza ukuvezwa okugcwele ngazo zonke izimoto zethu ezisetshenzisiwe. Siphenya kahle yonke imoto edlula eminyango yethu ukuqinisekisa ukuthi iyahlangabezana noma yeqe amazinga ethu alukhuni.
Okubhalwe Ngokugcwele: Uzokwazi ukufinyelela kunoma yiluphi kanye nayo yonke imininingwane esingayiqoqa kunoma iyiphi yezimoto zethu ngaphambi kokukhetha ukuthenga.
IHholo Lesimemezelo Samasiko
Indawo ekhethekile yokugada amasiko
Trade angaphandle olunzulu yesevisi
Ukungenisa nokuthekelisa indawo yokugcina impahla
I-cross border e-commerce Industrial Park
Indawo yokugcina impahla eboshiwe
I-Hankoubei, Igama eliphelele i-Hankoubei Import and Expert Service Co., ltd, iyinkampani ephethwe ngokuphelele yeZall Smart commerce Group (02098.HK), elinye lamabhizinisi aphezulu ayi-100 eChina nenkampani efakwe kuhlu ebhodini elikhulu laseHongKong . Le nkampani yasungulwa ngonyaka we-2015 ngenhloko-dolobha ebhalisiwe engu-50 million RMB.
Singabanye bamabhizinisi okuthekelisa izimoto asetshenzisiwe eChina, futhi futhi yilo elikhulu kunawo wonke esifundazweni saseHubei. Isekelwe eWuhan, izibophezela ekwakheni ipulatifomu yesevisi yokuthekelisa imoto esetshenzisiwe ukuze isebenzele amazwe "eBelt and Road", anikezelwe ukuba ngumthumeli wemoto omkhulu kunabo bonke osetshenzisiwe eChina.
Amanani Amabhizinisi: Ikhasimende Kuqala, Abantu Ekugxileni, Ukuthanda Ukwenza Okuhle
Ububanzi bebhizinisi: ukuthengiswa kwezimoto ezisetshenzisiwe, insizakalo yangemva kokuthengisa, umbukiso, ukuthekelisa, imakethe yokuhweba, ukuqasha imoto, insizakalo yezezimali, ukuhanjiswa kwempahla, njll.